Mg Aung Ko Ko Zin & Ma May Zin Oo - Wedding Guide
Home - Wedding Guide - Myanmar wedding guide featuring tips andadirectory of venue, tailors, cakes, wedding dress shops.
http://www.weddingguide.com.mm/venues/item/117-ibis-hotel-yangon-stadium.html ibis Hotel - Yangon Stadium - Wedding Guide - ibis Hotel သည် ရန်ကုန်မြို့၊ လေးထောင့်ကန်လမ်းမကြီး၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်တွင် တည်ရှိသည့် ဟိုတယ်ဖြစ်သည်။ ဟိုတယ်ကို သုဝဏ္ဏအားကစားကွင်းဘက်ကို မျက်နှာမူ၍ တည...
http://www.weddingguide.com.mm/venues/item/115-jasmine-palace-hotel.html Jasmine Palace Hotel - Wedding Guide - Jasmine Palace Hotel သည် ရန်ကုန်မြို့၊ ပြည်လမ်းမကြီး၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်တွင် တည်ရှိသည့်4Stars ဟိုတယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းဟိုတယ်တွင် မွေးနေ့ပွဲများ၊...
http://www.weddingguide.com.mm/venues/item/112-thu-mingalar-yama-le-di-monastery.html Thu Mingalar Yama Le Di Monastery - Wedding Guide - လယ်တီကျောင်းတိုက်သည် ရန်ကုန်မြို့၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ကျိုက္ကဆံဘုရားအနီးမှာ တည်ရှိပါတယ်။ အဲဒီကျောင်းတိုက်မှာ ရွှေရတုခန်းမနှင့် ငွေရတုခန်းမဆိုပြီး ခန်...
http://www.weddingguide.com.mm/venues/item/111-inya-kan-pyar-monastery.html Inya Kan Pyar Monastery - Wedding Guide - အင်းယားကန်ဖျားကျောင်းသည် ရန်ကုန်မြို့၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း၊ မြ၀တီဓာတ်ဆီဆိုင်ဘေးလမ်း တွင် တည်ရှိပါတယ်။ အင်းယားကန်ဖျားကျောင်းတိုက်တွင် မင်္ဂလာအချိန်ကို မိမ...
http://www.weddingguide.com.mm/real-weddings/item/82-real-wedding.html Mg Toe Pyae Aung & Ma Wai Wai Yu - Wedding Guide - အခုတင်ပြမယ့် မင်္ဂလာဆောင်အကြောင်းကတော့ Novotel Hotel တွင် အနောက်တိုင်းစတိုင်ဖြင့် မင်္ဂလာပွဲ ကျင်းပခဲ့တဲ့ သတို့သားမောင်တိုးပြည့်အောင်နှင့် သတို့သမီး မဝေေ၀...
http://www.weddingguide.com.mm/real-weddings/item/55-mg-ye-myint-kyaw-ma-may-thwe-hlaing.html Mg Ye Myint Kyaw & Ma May Thwe Hlaing - Wedding Guide - ယနေ့တင်ပြမည့် မင်္ဂလာဆောင်အကြောင်းကတော့ နယ်တွင်တစ်ကြိမ်၊ အင်းယားကန်ဖျားကျောင်းတိုက်တွင် တစ်ကြိမ် မြန်မာဆန်ဆန် မင်္ဂလာဆောင်ခဲ့တဲ့ သတို့သားမောင်ရဲမြင့်ကျော်...
http://www.weddingguide.com.mm/real-weddings/item/47-mg-min-thiha-ma-pale-thwe.html Mg Min Thiha & Ma Pale Thwe - Wedding Guide - ယနေ့တင်ပြမည့် မင်္ဂလာဆောင်အကြောင်းကတော့ Yuzana Hotel – Shwegondine တွင် မြန်မာဆန်ဆန် မင်္ဂလာဆောင်ခဲ့တဲ့ သတို့သားမောင်မင်းသီဟနှင့် သတို့သမီး မပုလဲသွယ...
http://www.weddingguide.com.mm/real-weddings/item/45-mg-aung-ko-ko-zin-ma-may-zin-oo.html Mg Aung Ko Ko Zin & Ma May Zin Oo - Wedding Guide - ယနေ့တင်ပြမည့် မင်္ဂလာဆောင် အကြောင်းကတော့ Sule Shangri-La Hotel တွင် မြန်မာဆန်ဆန် မင်္ဂလာဆောင်ခဲ့တဲ့ သတို့သား မောင်အောင်ကိုကိုဇင်နှင့် သတို့သမီး မမေဇ...
Country: 128.199.148.112, Asia, SG
V. Schmidt - HOPEFUL
Starting out with4stars because i just got this today and i think it's going to do what i want it to do. The two things i lose track of most often are my cell phone and my keys. Now i can use my phone to find my keys and my keys to find the phone - hopefully they will not go missing at the same time.